Thursday October 18, 2018 - 16:17:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanayo wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in rag hubeysan ay maanta barqadii dileen jeneral katirsanaa ciidanka xukuumada, hadana u sharaxnaa inuu ka mid noqdo baarlamaanka dowlada xilli uu ku sugna qeyba kamid ah gobolka Helmand ee dhaca
Wararka ka imaanayo wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in rag hubeysan ay maanta barqadii dileen jeneral katirsanaa ciidanka xukuumada, hadana u sharaxnaa inuu ka mid noqdo baarlamaanka dowlada xilli uu ku sugna qeyba kamid ah gobolka Helmand ee dhaca koofurta wadanka Afghanistan.
Jeneralka la dilay ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdul Jabaar Qahramaan, waxa uuna kamid ahaa xizbiga Shuuciga ah ee wadanka Afghanistaan, xilliga la dilayana waxa uu ku sugnaa xafiiskiisa oo ku yaala magaalada Lashkar-Jaah, oo ah caasimada gobolka Helmand.
Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa sheegatay mas'uuliyada dilka Sarkaalkan waxa ayna tilmaantay in mujaahidintu ay qarax miino ugu xireen gudaha xafiiskiisa halkaas oo ay ku dhinteen Jeneraalka iyo Laba katirsanaa Lataliye-yaashiisa dhanka siyaasadda sidoo kalena ay ku dhaawacmeen illaa lix ka tirsan istaafkiisa khaaska ah.
Cabdul Jabaar Qahramaan ayaa u diyaar garoobay inuu u tartamo kursi ka banana baarlamaanka xukuumada Afghanistan, kaas oo uu ku raja weynaa inuu ku guuleysto, bilihi ugu danbeeyana waxa uu gobolka ka waday Olole uu ugu diyaar garoobayo doorashada soo socota.
Jeneraalkan ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay xukuumadihii is xig xigay ee wadanka Afghanistaan, wuxuuna xil sare kasoo qabtay xukuumadii Najiib ee wadanka Afghanistan ka talin jirtay sanadihi 1987-1996di, ilaa hadana kama bixin saaxada siyaasada, sanadihii lasoo dhaafayna wuxuu si toos ah ugu lug lahaa dagaalka Islaam la dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan wadanka Afghanistan.
Mudo hada laga joogo laba sano ayaa jeneralkan wakiil looga dhigay dagaalka islaam la dirirka ah ee Mareykanku ay ka wadaan wadanka Afghanistan, wuxuuna fuliyey weeraro badan oo uu ku doonayey inuu kusoo ceshto dhulalka ay mujaahidintu gacanta ku dhigeen, isagoo isticmaalaya Asaaliib kala duwan oo Dhagar ah, balse dhamaan howl galadiisi waxa ay kusoo dhamaadeen Fashil.
Mudadii uu hogaaminayay dagaalka Gobolka Helmand ayuu jeneraal Cabdil Jabaar isticmaalay siyaasada loo yaqaan, Marka hore Burburi, kadibna dhis aad maamushide, isagoo gobolka ka geystay duqeymo fara badan oo aan kala sooceyn shacab iyo Mujaahid, sii uu musliminta u argagax galiyo.
Muhjahidinta Daliban ayaa sheegay in Jeneraalka Shuuciga ah uu gobolka Helmand ka geystay xasuuq wadareedyo kala duwan labadii sano ee lasoo dhaafay, isagoona halkaas ka Aas-Aasay Maleeshiyaad gaaraya ilaa dhowr boqol, kuwaas oo ku caan baxay kufsiga, dhaca, boobka, dilka iyo xasuuq wadareedyada, inkastoo markii danbe mujaahidinta Imaarada ay ku guuleysteen inay baabi’iyaan, dilaana inta dadkii xubnaha ka noqday maleeshiyaadan sumcad xumada ku caan baxay.
Howl galkan ayaa qeyb ka ahaa camaliyaatka Alkhandaq ee imaarada Islaamiga ah ay ka wado wadanka Afghanistan, dilkiisana waxa uu fariin cad yahay cid kasta oo ku lug yeelatay xasuuqyada shacabka musliminta ah ee dhulka Afghanistan, fariintaas oo ah in mujaahidintu aysan marnaba ilaabi doonin dhagar qabayaasha dhibaatada u geystay shacabka dulman ee wadankaas ku dhaqan.